Ahoana no hanafainganana ny metabolisma? | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Matetika, ny lanjany be loatra dia miankina mivantana amin'ny kalitaon'ny metabolisma ao amin'ny vatantsika. Misy ny olona afaka mihinana izay tadiaviny, amin'ny habetsany ary tsy mihary lanja mihitsy, raha mila manara-maso ny sakafony sy manao fanatanjahan-tena ny hafa mba hitazomana ny vatany hilamina.
Ny olona mijaly noho ny hypometabolism no tsy manam-bintana kely indrindra: kaloria kely fanampiny, ary efa matavy izy ireo. Manana metabolisma tena ambany tokoa izy ireo, izay tsy ahodina ho angovo ireo kaloria voaray, fa apetraka any amin'ny sisiny amin'ny vala tsy ilaina.
Noho izany, raha tena te-hanana olo-malaza mahafinaritra ianao dia mila manomboka ny fizotrany metabolisma... Tsy azo lavina fa ny mpahay sakafo iray ihany no afaka manome anao "torolàlana ho an'ny hetsika" marina, hahazoana antoka fa tena manana olana metabolika ianao.
Na izany aza, raha mbola betsaka ny fotoana alohan'ny fanendrena ny dokotera, ary te handray andraikitra dieny izao ianao, na raha te hanana fiatraikany tsara amin'ny vatanao ianao, dia misy fomba mora hanatsarana ny metabolisma ao an-trano.
Ahoana ny fomba hanafainganana ny metabolisma ao an-trano
1. Ny fanatanjahan-tena lava dia mandeha amin'ny rivotra madio manampy amin'ny fampanan-karena ny ra amin'ny ôksizena, izay mandoro tanteraka ny kaloria be loatra sy ny tavy voangona ao ambanin'ny hoditra.
Ny oksizenina koa dia mifandray amin'ny taova rehetra amin'ny vatana ka mahatonga azy ireo ho matanjaka sy ho salama kokoa.
Nefa tadidio fa ny fihazakazahana sy ny fandehanana haingana fotsiny dia hanampy anao handoro tavy, ny fandehanana miadana tsy tapaka tsy hitondra tombony be.
2. Ny sakafo maraina feno sy mahasalama ihany no tena "mamoha" ny vatana, manome fanombohana ny fizotran'ny metabolika, izay miadana rehefa hariva. Raha manafoana ny sakafo maraina ianao dia hijanona ho "rendremana" ny vatana, izay hisy fiantraikany amin'ny asan'ny asanao sy ny metabolismanao.
3. Ny dite maitso dia manala tanteraka ny poizina sy ny poizina amin'ny vatana manakana ny metabolisma, ary manala ny edema ihany koa. Ny kafeinina ao anaty dite dia mandoro kaloria ary misy vokany tsara amin'ny fo.
Tadidio fotsiny fa mila misotro dite maitso vao navao ianao, ary tsy mihoatra ny telo kaopy isan'andro.
4. Efa voaporofo fa ny kanelina dia manafaingana ny fizotran'ny metabolika in-20. Izy io koa dia manampy amin'ny famotehana siramamy haingana kokoa, mampihena glucose amin'ny ra, izay mampihena ny fahazotoan-komana.
5. Hitan'ny mpahay sakafo any California fa ny fihinanana maneziôma isan'andro dia misy fiatraikany tsara amin'ny metabolisma, mandoro tavy ary mampiroborobo ny fihenan'ny lanja.
Azonao atao ny mandray azy io amin'ny pilina na amin'ny fihinanana legioma, episy, bran ary kaody.
6. Aza hadino ny mametraka ara-dalàna ny torimasonao! Mandritra ny torimaso ihany vao miala sasatra ny vatana, mahazo tanjaka mandritra ny andro mavitrika iray ary mamokatra hormonina mitombo, izay ilaina amin'ny fanavaozana ny selan'ny ati-doha sy ny fanatsarana ny metabolisma.
Ary koa, io hormonina io dia zava-dehibe amin'ny olona miha very, satria mampihena be ny fahazotoan-komana.
Fanangonana monastic ho an'ny fihenan-danja: fomba fahandro, firafitra ary hevitra
Inona avy ireo fomba hampihenana ny metabolisma?
Fiofanana manokana ao amin'ny gym: famaritana, programa ary tolo-kevitra
Sliming Ginger Tea
Posted in fahasalamana sy fanafody
Prev Fotoana firy handaniana eo anelanelan'ny fanazaran-tena
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,679.